‘Itoophiyaa dimookiraatessuuf gaaffiin fottoquu seera ala godhamuu qaba’-Obbo Iskindir Naggaa – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo‘Itoophiyaa dimookiraatessuuf gaaffiin fottoquu seera ala godhamuu qaba’-Obbo Iskindir Naggaa
(bbcafaanoromoo)–Itoophiyaa dimokiraatofte gochuun yoo barbaachise gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga fottoquutti jedhu seeraan ala gochuu qabna jedhan pireezidantiin dhaaba Baaldiraas Dimookrasii Dhugaaf obbo Iskindir Naggaa.
Biyyootni akka Itaalii yaada fottuquu seeraan ala gochuu akka fakkeenyaatti kaasuun Itoophiyaanis tokkummaa ishee eeguuf yaada fottuquu seeraan ala gochuu akka ulaagaatti kaahuu qabdii jedhan obbo Iskindir.
Hoogganaan dhaaba Baaldiraas Dimookrasii dhugaaf obbo Iskindir Naggaa hidhaa waggaa tokkoofi walakkaatti siiqurraa Jimaata darbe erga hiikamanii har’a miidiyaaleef ibsa kennaniiru.
Ibsi isaanii turtii hidhaa isaaniifi akkaataa itti hiikaman irratti kan xiyyeefatu yeroo ta’u haala qabatamaa biyyaa irrattis yaada isaanii kennaniiru.
Himanni adda cituu fi dhiifamaan hidhaa bahuu ija seeraatiin
‘Akkattin hiikame hin beeku’- Waggoota 27 keessatti yeroo 14 kan hidhaman Obbo Dajanee Xaafaa
Mootummaan gidduugaleessaa TPLF irratti tarkaanfiin fudhate seera qabeessaafi kan maluudha jedhee kan amanu ta’uu kaan dubbatan obbo Iskindir, ammas ”TPLF isa Itoophiyaa nan diiga jedhu bakka inni jiru gahuun olaantummaan seeraa irratti kabajamuu qabaa” jedhan.
Hooggantootni Baaldiraashidhaarraa hiikaman naannoo Amaaraafi Affaaritti imaluun waraan Kaaba Itoophiyaatti godhamaa tureen miidhaa qaqqabee fi aarsaa kaffalame daawwachuun galateeffachuuf karoorfachuu dhaabichi ibsa isaa har’aan beekiseera.
”Waraanni Kaaba Itoophiyaa kan eegale TPLF’n ta’uu dhaabni keenya ni amana. Mootummaan giduugaleessaa hanqina raawwii qabaatus waraanni ofirraa ittisuuf godhe haqa qabeessa akka ta’e ni amanna. Haata’u malee mootummaan duula marsaa duraa xumuruu ibsuun isaa balaa guddaa kan baatu ta’u gamaaggamneerra.”
”Mootummaan yaada lammiilee Itoophiyaa ganamneerra jedhuuf tuffiin agarsiisaa jiru sirreessuu qaba” jechuun hidhaa gadhiifamuu hoogganoota TPLF balaaleffateera.
TPLF qormaata tokkummaa Itoophiyaa ta’uu humna waraanaa isa dandeesisurra waan jiruuf humni isaa kun akka laafu godhamuu qaba kan jedhu ibsi dhaabichaa, hooggantootni dhaabichaa to’annoo seeraa jala taa’anii dhimma isaanii hordofaa turan hiikamuun ”murtee olaantummaa seeraa sarbudhaa” jedheera.
”Murteen kun fudhatama hamilees ta’e siyaasaa hin qabu” jechuun balaaleffateera.
Pireezidantii dhaabichaa obbo Iskindir dabalatee hooggantootni afur wagga tokkof walakkaaf waraana waliinii kaasuuf yaalaniiru, shorkeessummaaf socho’aa jiru jechuun himata dhugaa hin taaneen hidhamanii turuu yaadateera.
Miseensonni paartichaa biroon shan labsii yeroo muddamaa sarbuun hidhaamanii jiraachuus seeraan ala jechuun komateera.
Obbo Iskindir fa’aa hidhaa hiikamuun isaanii tasaa fi kan hin eegamne ta’uun ibsameera.
”Hoogganoonni paartichaa hidhaati gadhiifaman himata irratti dhiyaatee tureen walqabatee osoodhuma hidhaan umrii guutuu itti muramee dhiifama akka hin gaafanneefi bilisaan gadhiifamuu akka qaban kalattiinis kallattiin alas mootummaa beeksisaniiru.”
Ji’oota afarn darbaniifis mootummaa waliin dubbiin godhamee akka hin beekne ibseera.
Kanaafis ”mootummaan hooggantoota keenya himata sobaan hidhee ture dhiifama gaafatee beenyaa kaffaluu qaba.”
Marii biyyaalessaa gaggeefamuuf yaadame ilaalchisee yaada kenneen dhaabichi rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf furmaatni mariin akka dhufu akka amanu ibsee, ”Mariin kun qumaara siyaasaarr bilisa ta’ee galma akka gahu nan qabsaa’a” jedheera.
Mariin godhamu tokkummaa Itoophiyaaf eeggannoo barbaachisu kan taasisu, sochii siyaasaa karaa nagaa kan jajjeebeessu akka ta’u darbees dhiibbaa mootummaarraa bilisa ta’ee adeemsicchi hunda hirmaachisaa fi amanamaa ta’uu isaaf hawaasni idila addunyaa akka taajjabu ta’uu qabaa jedheera
ODUU Hatattama Amma nu gahe Afaan Oromoo INJIFANNOO WBO |Gamtaa Media
ODDUU AMEE Wal Dhabdee Waranaa Motumma Jiduu Fi Kessaa
ODDUU Hatatammaa Nannoo Amhara Iraa Amaa Nu Dhaqabdee